नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान तर्फ, नेतृत्वको लागि पाण्डे, चन्द र शेर्पाको रस्साकस्सी ! || सुनौलो नेपाल
नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान तर्फ, नेतृत्वको लागि पाण्डे, चन्द र शेर्पाको रस्साकस्सी !
काठमाण्डाै – नेपालमा क्रिकेटको आधिकारिक निकाय पुन:स्थापना गर्नका लागि आईसीसीले दिएको रोडम्यापअनुसार एकपछि अर्को रुपमा नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान) को मातहतमा रहेका जिल्ला संघहरुको चुनाव भइरहेको छ ।यस्तैमा ३९ मध्ये ३८ जिल्लाको चुनाव सम्पन्न भएको छ । आईसीसीले गठन गरेको स्वतन्त्र समितिको निर्देशनअनुसार नै यतिबेला विवादित बनेका केही जिल्ला संघहरुको चुनाव सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये केही जिल्लामा पुरानै अनुहार देखिएका छन भने केहीमा नयाँ अनुहार आएका छन । अब जिल्ला स्तरमा चुनाव हुन बाँकी काठमाण्डौ मात्र रहेको छ ।
यसका साथै प्रदेशस्तरीय चुनावको काम पनि अगाडि बढिसकेको छ । जसमा प्रदेश एक चार र सातको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश सातको अध्यक्षमा हरि रेग्मी र गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षतामा देवेन्द्र प्रजु निर्वाचित भइसकेका छन । यस्तैमा शनिबार भएको प्रदेश १ को चुनावले मिङ्मा डुन्डु शेर्पाको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यसमिती चयन गरेको छ ।
अब एक जिल्ला र तीन प्रदेशको निर्वाचन बाँकी रहेका बेला केन्द्रीय चुनाव दशैँ अगाडि हुने देखिएको छ । स्वतन्त्र समितिका सदस्य एलबी क्षेत्रीका अनुसार केन्द्रीय चुनावका लागि भदौको अन्तिम वा असोजको पहिलो साताको मितिको तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले भदौमा भएमा २८ र २९ वा असोजमा भए ३ र ४ गते क्यानको केन्द्रीय चुनाव गर्ने तयारी भएका बताए ।केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्वतन्त्र समितिको काम सकिन्छ। त्यसपछि हामी आइसिसीलाई निर्वाचनसम्मको प्रतिवेदन पठाउछौं क्षेत्री भन्छन् त्यसपछि निर्वाचित केन्द्रीय समितिले आइसिसीलाई निलम्बन फुकुवाका लागि अनुरोध गर्नु पर्नेछ। यसो भएको अवस्थामा अक्टोबर दोस्रो सातामा नेपाली क्रिकेटका लागि खुसीको खबर आउन सक्छ।
नेतृत्वका लागि तीन समूहको दौडधुप क्यानमा अहिले तीन पक्ष देखिएको छ। निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द समूह क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे र प्रदेश १ को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका मिङ्ग्मा डण्डु शेर्पा समूहले नेतृत्वका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन्।